Apple hamindra ny serivisy iCloud avy any Amazon mankany Inspur, mpanome tolotra serivisy any Sina | Avy amin'ny mac aho
Ny vaovao lazainay aminao anio dia mifandraika amin'ny Apple sy China ary tsy misy ifandraisany amin'ny orinasa izay manao ny fivorian'ny ankamaroan'ny fitaovany, Foxconn. Amin'ity tranga ity, androany dia fantatra fa Apple, miandry ny fahafahany mampiasa herinaratra angon-drakitra manokana mitazona ny lanjan'ny iCloud hampiasa orinasa iray avy any Shina noho izany.
Hatramin'izao, ary miandry ny hanana 100% ivon-drakitra manokana, ny serivisy iCloud dia miankina betsaka amin'ny serivisy web ananan'i Amazon, saingy miteraka izany fandaniam-bola marobe ho an'ny orinasan'ny paoma manaikitra ny zavatra notadiavin'izy ireo ho vahaolana amin'ny tany Azia.
Ilay orinasa heverina fa mifandray amin'i Apple ho an'ny fitantanana data iCloud dia antsoina hoe Inspur ary ny foibeny dia any Shina ary ho lasa sehatra lehibe hanangonan'ny Apple ny angon-drakitry ny mpampiasa azy rehetra, izay mitombo isan'andro.
Araka ny efa noresahintsika, ity fanapahan-kevitra ity dia vokatry ny fandaniam-bola toa an'i Apple mizara amin'ny ivon-data tsy miankina Mitombo izy ireo satria mitombo ny isan'ny mpampiasa. Noho io antony io, ireo avy amin'ny Cupertino dia efa nanidy fifanarahana tamin'ity orinasa ity izay hiantoka ny serivisy sy ny tahiry amin'ny serivisy.
Apple dia orinasa iray ary toy izany hatrany dia mitady ny safidy tsara indrindra mamela azy ireo hanana tombony bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fanolorana serivisy tsara kokoa sy azo antoka kokoa. Mazava fa ny fanjakana idealy dia ny fananan'ny Apple mpizara azy manokana, izay efa ananan'ny sasany, saingy tsy ampy hanompoana ny isan'ny mpampiasa misoratra anarana. Mandra-pahatongan'izany, Tongasoa eto amin'ny fiaraha-miasa hataonao amin'i Inspur.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iCloud » Apple hamindra ny serivisy iCloud avy any Amazon mankany Inspur, mpanome tolotra serivisy any Sina
Puffff. Manala ny tenako amin'ny icloud aho
Apple Watch amin'ity taona ity dia ho kinova S fa tsy maodely vaovao